Paspọtụ mgbochi COVID-19 maka njem n'ime EU na Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Paspọtụ mgbochi COVID-19 maka njem n'ime EU na Europe
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 29, 2021
Mịnịsta Ala Gris Kyriakos Mitsotakis kpọrọ akwụkwọ ikike mgbochi ọgwụ "ụzọ ngwangwa iji kwado njem" na Europe ma nyere aka "weghachite nnwere onwe ịgagharị," dịka European Union na-akwagide ka ndị otu niile soro usoro a.
EU gbara mbọ ka ndị otu niile dị iri abụọ na asaa tinye akwụkwọ ikike ngafe zuru oke site na July 27
Paspọtụ ahụ ga-adị ire na mba ndị na-abụghị EU Iceland, Liechtenstein, Norway, na Switzerland
Ndị ọrụ gọọmentị US na-ekwu na ha na-atụlekwa echiche a
Gris na Denmark wepụrụ njem ọhụrụ na Fraịde, bụrụ ndị European Union mbụ na-ebute mpempe akwụkwọ mgbochi COVID-19 maka njem n'ime EU.
The European Union agbadoro ka ndị otu niile dị iri abụọ na asaa tinye akwụkwọ ikike ngafe zuru oke site na July 27, na-ekwenye na atụmatụ a n'izu gara aga tupu oge ezumike oge ezumike. Nkwa a na-abịa mgbe ndị otu a kpọrọ oku ka ha belata ihe mgbochi njem ndị etinyere n'ịdị elu nke ọrịa ahụ, na-atụ aro ka ndị otu kwere ka ndị ọbịa si mba ọzọ ma ọ bụrụ na a na-enye ha ọgwụ mgbochi zuru oke.
Paspọtụ ahụ ga-adị ire na mba ndị na-abụghị EU Iceland, Liechtenstein, Norway na Switzerland, dịka European Commission si kwuo.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ EU, gụnyere Denmark, etinyeworị akwụkwọ ikike nke ọgwụ mgbochi nke aka ha, enwere ike iji paspọtụ ọhụrụ ahụ mee njem njem gafere ókèala, kwekọrọ na atụmatụ European Commission na Machị.
A na-ejikwa paspọtụ Greek na Danish site na ngwa ngwa ama ama na-egosi ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi onye ọrụ yana oge ikpeazụ a nwalere ha maka coronavirus. Ha abụọ na-ejikwa koodu QR nwere ike ịghachite ozi ahụ ngwa ngwa, n'agbanyeghị na a ga-ewepụtakwa nsụgharị akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na nzuko omeiwu nke Europe akwadobeghị atụmatụ paspọtụ, ọtụtụ mba agafeela n'ihu. Na mgbakwunye na Gris na Denmark, Ireland kwupụtakwara atụmatụ na Fraịde iji mee ka COVID gafere mba ụwa site na July 19, ebe UK National Health Service emelitere ngwa ngwa paspọtụ dijitalụ ya maka njem njem.
Ndị ọrụ gọọmentị US na-ekwu na ha na-atụlekwa echiche a. Dika uzo ahu si enweta njem na Europe dum, ndi isi ochichi nke United States ekwuola na ha na-elekwa anya maka njem ndi ozo, onye isi oru Ngalaba nke Homeland (DHS) bu Alejandro Mayorkas na-agwa ABC na Fraide na ochichi Biden “na-ele ezigbo anya . ”
Otu onye na-ekwuchitere DHS mechara kọwaa, na "enweghị iwu gọọmentị" maka ụdị ọgwụ mgbochi ọ bụla, na-agbakwụnye na gọọmentị ga-enyere ndị America aka imezu ihe ndị a chọrọ na mba ndị ọzọ.
“Nke ahụ bụ ihe [Mayorkas] na-ezo aka na ya - ijide n’aka na ndị njem US niile ga-enwe ike ịzute ihe ọ bụla achọrọ maka ịbanye mba ọzọ,” ka ha kwuru.